Ceelgows Xogta Dowlada Puntland oo shaaca ka qaaday in danbiilayaasha Maxkamadu ay dilaalka ku xukuntay dhawaan la fulindoonoLast update 26-05-12Dawladda Puntland ayaa shaaca ka qaaday in aanay marnaba ka laabadan doonin xukunka maxamed ay ku riday eedeysane loo heysto inuu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa tababarayaasha shirkada Sarecen international.
edeysanahaan dilku maxakamadu ku xukuntay ayaa lagu magacaabaa Maxamed Jibriil oo asagu horey uga tirsanaa ciidamada Ilaalada Xeebaha Puntland, hase yeeshee geystay fal danbiyeed aad u weyn ayaa iminka ku xiran xabsiga dhex magaalada Bosaso qeybtiisa dil sugayaasha.
Gudoomiyaha ciidamada qalanbka sida ee Punrland Gen. Cabdulaahi Jaamac Geyre oo faah fahaiyay xukunka Maxakamada ayaa sheegay in aan marnaba laga noqon doonin xukunkii ay maxkamadu ku riday eedeysanahaasi, waxaana uu meesha ka saaray in dhag loo jalaq siinayo beelaha danbiile qaran raba in lasii daayo,tasoo dah fur u noqon karta foowdo iyo aanooyin hadhaaw aan la xakameyn karin.
Gen. Geyre ayaa hoosta ka xariiqay in xukunka maxkamada ay tahay mid aad looga baarandagay, isla markaana cadeymo iyo hubin tirabadan la horkeenay Maxakamada, ayna kiskaani ku cadeeyeen danbiilaha dilka uu u geystay Alle ha u naxariistee sarkaalka sare 11 nin oo lala soo qabtay ay farta ku fiiqeen.
(Sawiro + Warbixin) Booqashadii Gaas ee DanmarkSiyaasi Abdirxmaan Xoosh Jibriil, oo Qadiyadiisi ku iibsadey 1000$Gudoomiyaha Mudug iyo waxgarad kormeer ku tagay deegaanka Dhagaxyo-caddoBaarlamaanku wuu Garanayaa Khaladka, Balse Kama Hadli Karaan Amaankooda.Darteed Warbixin: DF oo la sheegay in ay arruurinayso Ciidan Qabiil oo loo ekaysiiyay ShabaabDhageyso, Fiiro gaar ah: Gabaygii Cusbaa ee m/wayne xasan Sh. Farxadda Jubaland iyo baroorta MuqdishoWaa kuma Ninka Uu Madaxweyne Hassan Culusow, u direy Kismaayo?Beesha Sade oo ka arinsanaysa sidii ay ka yeeli lahayd Col; Barre HiiraaleC/laahi Xuseen oo DF ku dhaliilay qaabka ay u maareysay dib-lumaasiyiinta Somalia